Free Wifi Connection နေရာတိုင်းကွန်ယက်မြေပုံ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ကိုချိတ်ဆက်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုဘယ်နေရာမှာမဆိုကွန်ယက်မြေပုံ Connect ကို
အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုဘယ်နေရာမှာမဆိုကွန်ယက်မြေပုံ Connect ကို APK ကို
⚡️အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ပါရန် wifi connector ကို Manager ကသင့် android ဖုန်းကိုနှစ်မြောက်မွေးနေ့ !! ⚡️
အဘို့ချိတ်ဆက်ပါ Find, connect, ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များစီမံခန့်ခွဲ။ တစ်ဦးသော graphical ရုပ်သံလိုင်းရေဒါနှင့်အတူအချက်ပြဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပါ။ ပတ်ပတ်လည်ပွင့်လင်းကွန်ရက်များရှာဖွေပါ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွန်ရက်ကကိရိယာများနှင့် wifi Analyzer
သင်တို့ပတ်လည် Wi-Fi ကိုလမ်းကြောင်းများပြသထားတယ်။ သင်သည်သင်၏ကြိုးမဲ့ router ကိုများအတွက်လျော့နည်းလူစည်ကားရုပ်သံလိုင်းကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။
အဆိုပါအချက်ပြမှုခွန်အားကိုရုပ်သံလိုင်းဂရပ်များနှင့်အပေါငျးတို့သရရှိနိုင်ပါ wifi network တစ်ခု Analyzer ၏ရုပ်သံလိုင်း်ရောက်စွက်ဖက်စောင့်ကြည့်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကိုအခမဲ့အင်တာနက် access များအတွက် Wi-Fi password များချိတ်ဆက်ရန်! နှင့် Wi-Fi network connection
အခမဲ့ Wi-Fi Connect ကိုအင်တာနက်ကကမ္ဘာ၏တိုင်းထောင့်ဖုံးအုပ်ဘီလီယံ shared wifi password ကိုပေးပါသည်။ သင့်တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီး, မြေပုံပြီးတော့ Analyzer အခမဲ့ wifi အပေါ်ဝိုင်ဖိုင်ဟော့စပေါ့ကိုပြတော်မူမည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခမဲ့ဝိုင်ဖိုင် connector ကိုအတူတောင်းဆိုအခမဲ့ wifi အဘို့သင်တို့အဘို့ shared wifi hotspot ကိုရှေးခယျြပေါ် မူတည်. password ကိုမပါဘဲချိတ်ဆက်တွေ့ရှိရန်ကူညီပေးသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Wi-Fi password များကိုရရှိနိုင်စေရန်အသုံးပြုသူပဏာမခြေလှမ်းအားဖြင့် shared နှင့်အသိဉာဏ်စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့်နေကြသည်။
★အလိုအလျောက် Finder အခမဲ့ကြိုးမဲ့ join နှင့်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက wifi network တစ်ခု Analyzer မျှဝေပါ။
★ရှာဖွေစာရင်းရုံ wifi connection ကိုလှည့်ပတ်သည်။
★ Optimize Tablet ကို & Mobile ကိုထောက်ခံကြောင်း။
★အမည်သို့မဟုတ် wifi signal ကိုအစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်စီ။
★အားလုံးအခမဲ့ Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့သို့မဟုတ် access point ချိတ်ဆက်ပါ။
★ပြရန် SSID နှင့် WIFI Password ကို။
ထိုကဲ့သို့သောအိုင်ပီလိပ်စာ, ထုတ်လုပ်သူ, ကိရိယာအမည်နှင့် MacAddress နှင့် IP Address ကိုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကို★။
★ရရှိနိုင်ပါ access ကိုမှတ်အဘို့သင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို scan လုပ်ပါ။
ရရှိနိုင်ကွန်ရက်★ Signal အဆင့်သမိုင်းဂရပ်
သင်သည်သင်၏ device ကို reset ချင်လျှင်★ connection ကိုရေဒါမန်နေဂျာပယ် / ရက်နေ့တွင်ဖွင့်။
wifi အခမဲ့ Connection ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအကောင်းဆုံးကို Wi-Fi ကိုစကင်နာ, မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်ရှိ wifi connection ကိုကြည့်ရှုသောအခါ, သင်သည်သင်၏ကိရိယာ MAC address ကိုနှင့် link ကိုမြန်နှုန်းကွန်ယက်၏အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဒါပေမယ့်လည်း IP address ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။
ဖြစ်ပြီးဒီ App ကအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဒေတာအသုံးပြုမှုနဲ့ save နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ android များအတွက်ကမ္ဘာကြီးအခမဲ့ wifi hotspot app ကိုကျော် Now ကိုရရှိနိုင်
အသစ်သော Feature ကို SPEEDTEST Plus အား (SPEEDTEST +) မိတ်ဆက်ခြင်း!
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း Wi-Fi, GPRS, 2G, 3G, 4G, DSL နှင့် ADSL များအတွက်မြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်တကွသင်ယခုအရှိဆုံးတိကျမှုအစီရင်ခံစာနှင့်တကွ, အင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာစစ်ဆေးမြန်ဆန်နိုင်ပါသည်, စက္ကန့်အတွင်း Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်! ဒါဟာ Wi-Fi ဟော့စပေါ့နှင့် GPRS (2G, 3G, 4G) ၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ထောက်ခံပါတယ်။ Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်မှုနှင့်သင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုမြန်ဆန်စွာရစေသည်အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ, ဒီမာစတာဗားရှင်း Lite ဖြစ်ပါတယ်။ !
★သင့်ရဲ့ Download, လွှတ်တင်ခြင်းနှင့် Ping ရှာဖွေပါ။
★စမ်းသပ်မှုမြန်နှုန်း (downlink) download လုပ်ပါ။
★စမ်းသပ်မှုမြန်နှုန်း (uplink) upload ။
★ DSL, ADSL, cable ကို wifi ဆက်သွယ်မှုအပေါ် Wi-Fi ဟော့စပေါ့၏ ping ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ရလဒ်တွေကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ပြသအချိန် ping ရဲ့အပ်လုဒ်ကို download speed အမြန်နှုန်း၏★သမိုင်းမှတ်တမ်း။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဒ်များကို၌သင်တို့၏စမ်းသပ်မှုခြေရာခံထားပါ။ ဒါက download နဲ့ upload speed ကို, ping ရဲ့ပါဝင်သည်။
★ Mbps / kbps ထောက်ပံ့ပေးသည်။
★ပြပွဲ IP address ကိုခင်းကျင်းပြသ။
★အကူအညီများထဲမှမြန်ဆန်သောကွန်ယက် wifi connection ကိုအတူပိုကောင်းစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အခမဲ့အိတ်ဆောင်ဝိုင်ဖိုင် Hotspot ရှာဖွေမတွေ့ရှိပါစေ။
★သင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသော GPRS, 2g, 3g, 4g, LTE ကိုဆဲလ်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
DSL, ADSL, cable ကိုဆက်သွယ်မှုအပေါ်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းနှင့်လွှတ်တင်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့် Wi-Fi ဟော့စပေါ့၏ Ping စမ်းသပ်ရန်။ အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ချိတ်ဆက်ဆာဗာများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် wifi network တစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့၏အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤလျှောက်လွှာကနေမိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ signal ကိုတွင် wifi လက်ခံရရှိရန်တတ်နိုင်ကြသည်ကို Android operating system ကို run နေသင့်ရဲ့ခရီးဆောင်မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ဖုန်းအားဖြင့်ဝိုင်ဖိုင် Hotspot ကွန်ယက်ကိုထုတ်လွှင့်။ အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဟော့စပေါ့များအတွက်အိတ်ဆောင်ဝိုင်ဖိုင် Hotspot Create
အခမဲ့အိတ်ဆောင်ဝိုင်ဖိုင် Hotspot လျှောက်လွှာ, high-speed ကိုအတွက်သင့်ဖုန်းမှရှယ်ယာ wifi tethering ဆိုတာဟော့စပေါ့, လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်း wifi လွှင့်ပေးနိုင်သည်။
wifi Hotspot အခမဲ့အိတ်ဆောင် wifi Hotspot App ကို, မ Hotspot Vpn
မှတ်ချက်: ဒီ application ကိုဟက်ကာအဘို့အ tools များမဟုတ်ပါ, wifi ဒါမှမဟုတ်ဝိုင်ဖိုင် Password ကို Hacker က hack ။
မှတ်ချက်: မဆိုရှိလြှငျဒီ app ကိုသာအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့သငျသညျရရှိနိုင်ကွန်ရက်များပြသပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။ ဒါဟာလုံခြုံပိုက်ကွန်ကိုမချိတ်ဆက်ထားဘူး
ဗားရှင်း 1.12: Update ကိုလျှောက်လွှာမှာ Data & Fixed အချို့ bug ကို
📢📢သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထောကျပံ့ပေးဘို့အားလုံးသင်သည်ယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ပါသည် တိုင်းတုံ့ပြန်ချက်ကျနော်တို့ဘာဂ်တိုးတက်စေရန်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေနှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး features တွေ update လုပ်နေကြသည်။
အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုဘယ်နေရာမှာမဆိုကွန်ယက်မြေပုံ Connect ကို
မေလ 18, 2019 မှာ 8: 12 နံနက်